गर्मीमा घरलाई प्राकृतिक तरिकाले कसरी शीतल बनाउने ? « Mero LifeStyle
अशोक शाह, इन्टेरियर डिजाइनर
मौसमअनुसार घर गर्मीमा शीतल, जाडोमा न्यानो होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । यतिबेला नेपालमा गर्मी मौसम चलिरहेको छ । गर्मीका कारण घरभित्र बस्दा पङ्खा र एयरकन्डिसन चलाउनु पर्ने बाध्यता छ । आजकाल सबै घरहरु कंक्रिटबाट बनेका छन् । घामले तातेको कंक्रिटको घर छिट्टै नसेलाउने भएकाले अबेरसम्म तापक्रम वृद्धि भएर गर्मी महसुस भइरहन्छ । त्यसैले गर्मी मौसममा घरलाई कसरी शीतल बनाउने त ? मुस्कान इन्टेरियर प्रा.लि.का म्यानेजिङ डाइरेक्टर तथा इन्टेरियर डिजाइनर अशोक शाहको सुझाव यस्तो छ ।
घरलाई प्रकृतिक रुपमा शीतल राख्न हावा आवतजावत गर्ने ठाउँ राम्रो हुनुपर्छ बताउँछन् । हावा आवतजावत गर्ने वातावरण मिलेको छैन भने घर गुम्म र उकुसमुकुस हुन्छ जसले गर्मी बढाउँछ ।
घर बनाउँदा नै तापक्रम तातो चिसो कायम राख्न सक्ने गरि बनाउन सकिन्छ । ५ इन्चको वाल भयो भने त्यसबाट तापक्रम भित्र पस्न सक्छ । त्यसैले, घर बनाउँदा ५ इन्च भन्दा मोटो वाल लगाइयो भने गर्मी तथा जाडो दुवैबेला तापक्रम सामान्य हुन्छ ।
यसैगरी, घरको वरपर खाली जग्गा छ भने त्याहाँ बोटबिरुवा रोप्नु पर्छ र भाडामा बस्नेहरुले बार्दली वा कोठामा पनि गमला राखेर इन्डोर प्लान्टहरु रोप्न सक्छन् । ती बोटबिरुवाले गर्दा अक्सिजनको प्रवाह राम्रो हुन्छ, र घर वरपरको वातावरण शीतल हुन्छ । इन्डोर विरुवाहरुमा मनी प्लान्ट, घ्यु कुमारी, पिसलिली, स्पाइडर प्लान्ट, स्नेक प्लान्टहरु पर्छन् । जसले घरभित्र शीतलता प्रदान गर्न सहयोग गर्छन् ।
अर्को कुरा घर बनाउँदा नै तापक्रम तातो चिसो कायम राख्न सक्ने गरि बनाउन सकिन्छ । ५ इन्चको वाल भयो भने त्यसबाट तापक्रम भित्र पस्न सक्छ । त्यसैले, घर बनाउँदा ५ इन्च भन्दा मोटो वाल लगाइयो भने गर्मी तथा जाडो दुवैबेला तापक्रम सामान्य हुन्छ । ढलान गर्दा पनि अलि बाक्लो गर्नु पर्छ । छाना प्रयोग भएको घरहरुमा सिमेन्ट प्रयोग भएको घर भन्दा धेरै गर्मी हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न फलसिलिङको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
घरमा पार्केटिङ गर्दा पनि कोठाहरु शीतल हुन्छ । यस्तै, वालको कलर पनि फिक्का हुनुपर्छ । गर्मी मौसममा झ्याल र ढोकामा पातलो र पारदर्शी जाली भएको पर्दा लगाउनुपर्छ ।
घरमा पार्केटिङ गर्दा पनि कोठाहरु शीतल हुन्छ । यस्तै, वालको कलर पनि फिक्का हुनुपर्छ । गर्मी मौसममा झ्याल र ढोकामा पातलो र पारदर्शी जाली भएको पर्दा लगाउनुपर्छ । घरमा राखिएका विजुलीको चिमले पनि फरक पार्छ । त्यसैले साधारण खाले चिम अर्थाल बल्बको सट्टा सिएफएल अर्थात लाइट कलरका बत्तीहरु राख्दा कोठा शीतल हुन्छ ।
यस्तै, बेडमा सुतीको पातलो तन्ना प्रयोग गर्नु पर्दछ । कोठा सकेसम्म खुल्ला राख्नु पर्छ । कोठामा अनावश्यक सामग्री राख्नु हुँदैन । एकै स्थानमा धेरै सामग्री राख्दा पनि यसले कोठामा गर्मी बढाउने गर्छ । घरको कोठाहरुलाई तातो हुन नदिन बत्ती, ग्याँस, कम्प्युटर, ओभन जस्ता तापका स्रोतहरु धेरैबेर चलाउनु हुँदैन । कोठाहरुको भेन्टिलेसन खुल्ला राख्नुपर्छ । दुई तह भएको सिसा प्रयोग गर्नाले पनि त्यसले इन्सुलेटरको काम गर्छ । बनिसकेको घरमा चाहिँ फ्लोर, सिलिङ र भित्तामा काठका पाता बिछ्याउन सकिन्छ । तराइतिर काठको सट्टा मार्वल छाप्न पनि सकिन्छ ।